नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): नेपालकी पुष्पा बस्नेत सीएनएन हिरो 2012 को टप टेनमा, अब अनुराधा कोईरालालाई जस्तै पुष्पा बस्नेतलाई प्रथम हुन हाम्रो भोटको आवश्यकता, कसरी भोट गर्ने ?
नेपालकी पुष्पा बस्नेत सीएनएन हिरो 2012 को टप टेनमा, अब अनुराधा कोईरालालाई जस्तै पुष्पा बस्नेतलाई प्रथम हुन हाम्रो भोटको आवश्यकता, कसरी भोट गर्ने ?
विभिन्न अपराधका कारण जेलमा रहेका बाबु आमासँगै बस्न बाध्य बालबालिकाहरुको उद्धार गरि पालन पोषण गर्दै आएकी नेपालकी पुष्पा बस्नेत सीएनएन हिरो 2012 को टप टेनमा पर्नु भएको छ । अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनले गएराति सार्वजनिक गरेको टप टेनको मनोनयनमा पुष्पा पर्नु भएको हो । अब भोटिङका आधारमा सीएनएन हिरो घोषणा हुनेछ । सीएनएन हिरोले २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पाउने छ भने टप टेनमा पर्नेले ५० हजार अमेरिकी डलर पाउने छ । विश्वभरबाट असाधारण काम गर्नेहरुलाई छानेर सिएनएनले सन् २००७ देखि हरेक वर्ष एक जनालाई सिएनएन हिरोको अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०१० को सिएनएन हिरोको
अवार्ड माइती नेपालकी अनुराधा कोइरालाले जित्नु भएको थियो ।अब अनुराधा कोईरालालाई जस्तै पुष्पा बस्नेतलाई प्रथम हुन हाम्रो भोटको नितान्त आवश्यकता रहेको छ । नोभेम्बर २८ सम्म खुल्ला हुने सो भोट १ वटा इमेल बराबर १ दिनमा १० भोट गर्न पाउनेछन् । आउनुहोस् भोट कसरी गर्ने सिकौं ।
कसरी भोट गर्ने ?
शुरुमा http://heroes.cnn.com/ मा वा http://edition.cnn.com/SPECIALS/cnn.heroes/2012.heroes/pushpa.basnet.html मा क्लीक गर्ने । त्यसपछि VOTE NOW मा क्लीक गरेपछि पुष्पा बस्नेतको फोटोमा क्लीक गर्ने । त्यसपछि तल पुष्पा बस्नेतको फोटो आउंछ । फोटो नजीकै रहेको खाली बक्समा आफ्नो इमेल राख्ने अनि तल दिइएको कोड जस्ताको तस्तै लेख्ने अनि VOTE मा क्लीक गरेपछि १ वटा भोट पुष्पाको लागि दिएको हुनेछ । यसरी लगातार दिनमा एउटै इमेलबाट १० पटक भोट गर्न पाउनेछौं ।
फेसबुकबाट पनि भोट गर्न सकिने कसरी ?
तपाईले चलाइराख्नु भएको फेसबुकबाट पनि भोट गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि माथी दिए जस्तै शुरुमा http://heroes.cnn.com/ मा वा http://edition.cnn.com/SPECIALS/cnn.heroes/2012.heroes/pushpa.basnet.html मा क्लीक गर्ने । त्यसपछि VOTE NOW मा क्लीक गरेपछि पुष्पा बस्नेतको फोटोमा क्लीक गर्ने । त्यसपछि तल पुष्पा बस्नेतको फोटो आउंछ । फोटो नजीकै रहेको इमेलबाट भोट गर्ने तरीका र फेसबुकबाट भोट गर्ने २ प्रकार मध्ये फेसबुकबाट भन्नेमा क्लीक गर्ने । त्यसपछि लग इन गर भनेर आएपछि फेसबुक लग इन गरेपछि एक भोट जानेछ । यो तरिकाबाट पनि एक दिनमा १० पटक लगातार भोट गर्न पाईनेछ ।
अनुराधा कोईरालाले अवार्ड पाउंदाको भिडियो हेर्न यहाँ तलको लिङ्कमा क्लीक गर्नुहोस्
Also visit my website :: how can increase height